NDMỌD Find: Etu esi achota ihe onyonyo vector yiri nke a na webusaiti gi na foto Google! Martech Zone
NDMỌD to: Etu esi achọta Images Vector yiri nke a na foto foto gị na Google Search Image
Na-ahazi na-ahu nagide faịlụ vektọ ndị nwere ikikere ma dị site na saịtị foto ngwaahịa. Ihe ịma aka a na-abịa mgbe ha chọrọ imelite nkwenye ndị ọzọ n'ime nzukọ iji kwekọọ styling na branding metụtara na mbụ wepụtara iconography ma ọ bụ akara.
N'oge ụfọdụ, nke a nwere ike ịbụ n'ihi ntụgharị yana… oge ụfọdụ ndị nrụpụta ọhụụ ma ọ bụ ndị ọrụ n'ụlọnga na-eweghara ọdịnaya na mbọ imewe na nzukọ. Nke a mere n'oge na-adịbeghị anya ka anyị na-arụ ọrụ maka otu ụlọ ọrụ ma na-enyere ha aka iwulite ọdịnaya.
Jiri Google Image Search Iji Chọta Vectors yiri nke a na Akaụntụ Foto
Ihe m ga - achọ ịkọrọ onye ọ bụla bụ iji Google Image Search. Nchọta onyonyo Google na enyere gị aka bulite onyonyo ma zaghachi ihe oyiyi yiri ya n'ofe weebụ. Otú ọ dị, otu ụzọ mkpirisi bụ na ị nwere ike ịchọ otu saịtị… dị ka saịtị foto ngwaahịa.
Adị m onye Mgbakwunye na ogologo oge ahịa nke Depositphotos®. Ha nwere nhọrọ dị egwu nke onyonyo, faịlụ vector (EPS), na vidiyo na saịtị ha yana ụfọdụ ọnụahịa na ikikere pụrụ iche. Nke a bụ otu m si eji Google Image Search chọta ihe mgbakwunye na saịtị ha nke dabara na otu styling.
Maka ihe atụ dị n'elu, achọrọ m mbupụ foto m vector na png ma ọ bụ jpg usoro iji bulite na Google Image Search:
Etu esi acho saiti foto maka ngwa ahia ndi yiri ya
Nzọụkwụ mbụ bụ iji Nchọta foto Google. Njikọ maka nke a dị n'elu aka nri nke ebe obibi Google.
Google Image Search na-enye ihe bulite akara ngosi ebe ị nwere ike bulite onyonyo nlere ịchọrọ ịchọọ.
Nchọta foto Google na-enye ihe bulite akara ngosi ebe ị nwere ike bulite ihe nlele oyiyi ịchọrọ ị chọọ. Enwekwara nhọrọ iji tinye ihe oyiyi URL ma ọ bụrụ na ịmara ebe ihe oyiyi ahụ bi na saịtị gị.
Ugbu a Nsonaazụ Achọpụta Foto Google ga-enye onyinyo ahụ. Ọ nwekwara ike ịgụnye usoro metadata ndị agbakwunyere na faịlụ oyuyo.
Nke a bụ ebe aghụghọ bụ… ị ​​nwere ike itinye a oke ọchụchọ iji chọọ nyocha n'ime otu weebụsaịtị iji syntax ndị a:
Nhọrọ, ị nwekwara ike ịgbakwunye okwu ndị ọzọ ma ọ bụrụ na-amasị gị, mana anaghị m eme mgbe ị na-achọ vector ka m wee nwee ike ịchọta ụlọ akwụkwọ ọ bụla nke vectors yiri nke ahụ iji budata ma jiri.
The Nsonaazụ Achọpụta Foto Google abịa na nhọrọ nke nsonaazụ ndị yiri nke mbụ ahụ. Nwere ike ịchọta vector mbụ n'ime nsonaazụ ya!
Ugbu a enwere m ike ịchọgharị Depositphotos® site na nsonaazụ ndị a, chọta onyonyo ma ọ bụ ọba akwụkwọ ndị yiri ya, ma jiri ha maka atụmatụ ndị ọzọ anyị na-eke maka onye ahịa ahụ!
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka Depositphotos® ke ibuotikọ emi.
Tags: mbọnnkwụnye egoEPSnchọta onyonyo googleoke ọchụchọ googleonye ihe ngosiọchụchọ saịtịnyocha saịtịfoto ngwaahịangwaahịa vektọfaịlụ vektọ
Etu m siri wuo otu nde dollar nke B2B Business na LinkedIn Video
Infographic: Ntuziaka nke Nchọpụta nsogbu Isiokwu nnyefe Email